ဒီချုပ် အမတ်သုံးဦးကို ပါတီ စည်းကမ်းအရ အရေးယူရန် ဆုံးဖြတ် - Yangon Media Group
ဒီချုပ် အမတ်သုံးဦးကို ပါတီ စည်းကမ်းအရ အရေးယူရန် ဆုံးဖြတ်
ဒီချုပ်ပါတီဝင် အမတ်သုံးဦးကို လွှတ်တော်ကိုယ် စားလှယ်တစ်ဦး၏ ဂုဏ်သိက္ခာနှင့် မညီသည့်ပြစ်မှုနှင့် လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ရာတွင် လုပ်ထုံးလုပ် နည်းများနှင့်မညီသည့် ဆောင်ရွက်မှုဟူသည့်ပြစ်မှုများဖြင့် ပါတီစည်းကမ်းအရ အရေးယူရန်ဆုံး ဖြတ်လိုက်ကြောင်းသိရသည်။ ယင်းကဲ့သို့ အမှုများကျူးလွန် ခဲ့သည့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်သုံးဦးကို လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တိုင်ကြားစာဌာနမှစိစစ်ကာ ဧပြီ ၂၂ ရက်ကကျင်းပသည့် ပါတီဗဟို အလုပ်အမှုဆောင်အစည်းအဝေး သို့တင်ပြကာ အရေးယူရန်ဆုံး ဖြတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း အမျိုး သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ ပြောခွင့်ရ ဒေါက်တာမျိုးညွန့်က ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ ဧပြီ ၂၂ ရက်က ပြောသည်။
”ကျွန်တော်တို့ပါတီကနေ ရွေးချယ်ခံရတဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ် စားလှယ်တွေကို ကျွန်တော်တာဝန်ယူတဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ်တိုင်ကြားစာဌာနက စိစစ်ပြီး တော့ ဗဟိုကော်မတီကိုတင်ပြပါတယ်။ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့ကနေပြီးတော့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တွေကို ပါတီစည်း ကမ်းအရ အရေးယူဖို့ဆုံးဖြတ် လိုက်ပါတယ်။ လွှတ်တော်ရဲ့ဂုဏ် သိက္ခာနဲ့မလျော်ညီတဲ့ ပြစ်မှုရှိတာ၊ နောက် ငွေစာရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့၊ လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက် လို့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနဲ့မညီဘဲ လုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေကြောင့် ပါတီ စည်းကမ်းအရ အရေးယူထားတာ ဖြစ်ပါတယ်”ဟု ၎င်းကပြောသည်။
အရေးယူခံထားရသည့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များမှာ မည်သူမည်ဝါဖြစ်သည်ကိုမူ မပြောနိုင်ကြောင်းနှင့် ¤င်းတို့ကိုခေါ်ယူ သတိပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဒေါက်တာမျိုးညွန့်က ပြောသည်။ ‘ခေါ်ယူသတိပေးတဲ့ အရေးယူမှုပေါ့နော်။ အခြားကတော့ပါတီတွင်းကိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက် ထုတ်ဖော်ပြောလို့မရဘူး”ဟု ၎င်းက ဆက်လက်ပြောသည်။
လက်ရှိအချိန်ထိ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီဝင် ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်ပတ်သက်သည့် တိုင်ကြားစာစုစုပေါင်း ၆ဝဝ ကျော်လက်ခံရရှိခဲ့ပြီး ယင်းထဲတွင်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တိုင် ကြားစာဌာနနှင့်ပတ်သက်သည့် တိုင်ကြားစာများမှာ ၄ဝဝ ခန့်သာရှိကြောင်း၊ ယင်းတိုင်ကြားစာ ၄ဝဝ ခန့်အတွင်းမှ ၃ဝဝ ကျော်ကိုစိစစ်ရာ အပြစ်ရှိသဖြင့် ပါတီစည်းကမ်းအရ အရေးယူထားမှုမှာ ၃၅ ဦး ကျော်ရှိကြောင်း၊ လက်ရှိအချိန်တွင် တိုင်စာစောင်ရေ ၄ဝ ကျော်သာကျန်ရှိကြောင်း ဒေါက်တာမျိုး ညွန့်က ပြောသည်။ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် အစည်းအဝေးကို ဧပြီ ၂၂ ရက်က ရန်ကုန်မြို့ ရွှေဂုံတိုင်ရှိ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်(ဗဟို)တွင် ကျင်းပခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် အဋ္ဌမ ပုံမှန်အစည်းအဝေး မေ ၁၄ ရက်တွင် ပြန်လည် စတင်မည်
၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ပညာသင်နှစ် အခြေခံပညာ အတန်းတင်စာမေးပွဲ အောင်စာရင်းများ ထုတ်ပြန်၊ အဆင့်သတ်မှတ်ချက??
အစိုးရသက်တမ်း သုံးနှစ်အတွင်း အမည်မည်းစာရင်းမှ ပယ်ဖျက်ပေးခဲ့သူ ၇ဝဝ ကျော်ရှိ
မင်းဘူး၊ စကုမြို့နယ်ရှိ ရွှေစက်တော် တောရိုင်းတိရစ္ဆာန် ဘေးမဲ့တော၌ မြန်မာ့ရွှေသမင် အကောင်ရေ ၁??
ဆုဖလားများနှင့်ဝေးကွာနေခြင်းကို စပါးနည်းပြပိုချက်တီနို ကာကွယ်
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဦးဆုံး သွန်းလုပ်သည့် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားသမဂ္ဂ ဥက္ကဋ္ဌ ကိုအောင်ဆန